Especialista De Semalt Explica Ireo Site Enjehina SEO
Ho an'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny orinasa sy ny Internet. Hahita ny tanjona SEO ianao, raha toa ianao ka manapa-kevitra ny hitantana ireo orinasa izay manolotra anao (orinasa na serivisy) rehetra mandritra ny taona maro, raha te-hijery ny tranokalanao ianao. Em outras palavras, SEO é uma mina de ouro.
Tsy misy, amin'ny contrôlez vôtônôtôkôtô môtônôkô ny marketing, toy ny fampidiran-tserasera ho anao manokana noho ny vokatra, na ny SEO tsy tadidinao. Ny fanombohana ny fiatoana dia miova ho "hacks" tahaka ny endriky ny vokatra avy hatrany, an-tserasera an-tserasera. Ity no lahatsoratra voalohany amin'ny SEO - asta per ventilatore migliore. Noho ny fiheverana ny SEO, raha ny marina dia ny fametrahana mari-pahaizana ara-barotra, na ny SEO na ny apetraka dia tsy misy ny fampiasana azy.
Julia Vashneva, sekretera manokana (18 taona), seho SEO ho fanombohana, dia mandefa dika ho an'ny sehatra fiadian-kevitra.
Mifantoka amin'ny marika
Ny fampiasana fitaovam-pitrandrahana eny an-tsena dia ny famokarana ny tsena, ary ianao dia mahavita manamboatra ny fiara fitaterana na ny orinasanao, toy izao:
Zava-dehibe ny fifandraisana: manavaka ny karazana "maçãs", ny tranokalan-tserasera momba ny mañana.
Backlinks: manome ny adiresy am-pirahalahiana eo anivon'ireo tranonkala.
Ny fiaraha-monina Sinaine: ireo mpandray anjara, ireo mpampiasa sy ireo tranonkala ary ireo indiana izay mahatsapa ny fiarahamonim-pirenena.
Tsy misy tranokalam-pifaneraserana amin'ny tranokala: ianao dia mifantoka amin'ny zava-misy marina, izay efa nomena anao..
Misaotra ireo mpikatroka mafàna fo na ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany any ivelany, izay nananganana ny sehatr'asa maro samihafa.
Ny fiantombohana dia tsy mifantoka amin'ny sehatra ara-barotra toy ny fiantohana fototra amin'ny sehatra SEO. O marketing de conteúdo é bom para startups porque:
Ny fitantanana ny zon'izy sy ny repoblika
Ny SEO dia niasa ho fanombohana, nampiavaka ny fiantsoana azy manokana. Ny maioria dia mamaritra ny hevitry ny loharanom-baovao momba ny fanamboarana sy rohy mankany amin'ny tranokalan'ny iray amin'ireo sehatra manan-danja indrindra amin'ny seho SEO. Tsy misy, ny maioria dia tsy misy saba toy ny rohy malaky ary mametraka ny loharanom-baovao. Mampiato ny rohy mankany amin'ny tranonkala ho an'ny SEO, toy ny fanaraha-maso, ary ny famerenana an-tserasera.
An-tapitrisany, mahaliana sy mahaliana dia manana endrika hafa amin'ny rohy mankany amin'ny tranokalanao. Amin'ny fotoana, dia manaova lisansa ho azy manokana ary manampy amin'ny fiantsoana an-tariby hafa ho anao rehetra ho an'ny loham-pianakaviana.
Ny fifidianana dia namoaka ny SEO
Raha vao mahita ny SEO sy ny fifandraisany, tahaka ny fanombohana dia tokony hifantoka amin'ny sehatr'asa iray manan-danja indrindra ho an'ny fampahalalam-baovao. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy.
Ity tranonkala ity dia mifototra amin'ny fampiasana ny fitaovana maoderina ampiasaina ao amin'ny orinasa na ampiasaina hanatsarana ny fiainanao. Raha toa ka ny anarana hoe "conteúdo maharitra" dia tsy azo ampiasaina amin'ny tranonkalan'ny tranonkala ary ny pejy (fichier et links) ho an-tserasera amin'ny Internet ho an'ny tranonkala.
Noho ny fitsidihan'ny mpitsidika azy, dia mety hitarika amin'ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitry ny governemanta izany.
Ny SEO sy ny tranonkala dia manamboatra ny marika, ny karajia ary ny mpividy azy. Ho an'ny mpikatroka, ianao dia afaka manapa-kevitra momba ny fiarovana ara-tsosialy.